Mainjiniya eRussia akasungwa nekushandisa komputa huru kumigodhi Bitcoin | Gadget nhau
Russia inosunga mainjiniya akati wandei ekushandisa supercomputer kumigodhi bitcoin
Boka revanjinjini vaishanda kuFederal Nuclear Center muRussia, inzvimbo yakavanzika kwazvo yenyukireya, vakasungwa mushure mekuyedza kushandisa komputa ine simba kwazvo munyika yangu bitcoin. Iyo cryptocurrency fivha inoita kunge isina magumo. Kunyangwe mune dzimwe nguva inosvika pakunyanyisa kusingafungidzirwe.
Pakupedzisira, iri boka remainjiniya rakachengetedzwa nemapurisa. Rabhoritari iri muguta reRussia reSarov. Muzvivakwa izvi mune super-komputa yavakaedza kushandisa kumedza Bitcoin. Kunyangwe zvisina kufamba zvakanaka.
Zvinoenderana nemishumo yakati wandei, Mhosva yemhosva yakanangana nevashandi yakatotanga. Sezvo izvi kuyedza kwevashandi kuchera Bitcoin kwanga kusiri kupihwa mvumo. Nekuti vashandi havabvumirwi kushandisa zvivakwa izvi zvakavanzika. Nechikonzero ichocho vakasungwa.
Mainjiniya anoziva kuti simba rakawanda rinodiwa mukuchera Bitcoin. Ndicho chikonzero nei vachibheja pakushandisa komputa iyi nesimba rakakura, rakasimba kwazvo muRussia. Zvakare, vakafunga kuti hapana munhu aizoona kuti komputa yanga ichishandiswa nekuda kwechinangwa ichi.
Iyo nguva iyo komputa yakabatana neInternet, iro dhipatimendi rekuchengetedza nzvimbo rakaudzwa. Kubva pane zvavaiziva kubva pakutanga zvirongwa zvevashandi. Sezvo iyi komputa isingatombobatana neInternet. Mushure mekuyambirwa, vakaenderera mberi nekusunga vashandi ava.
Parizvino pane maitiro ekurwisa mainjiniya aya aida kupfuma neBitcoin. Kunyangwe parizvino hapana chakataurwa pamusoro pechimiro chake kana pazuva rinogona kutongwa. Chinhu chega chinozivikanwa kunze kwekusungwa kwavo ndechekuti vadzingwa basa. Nyaya ingangoita iyo inouya kubva kuRussia. Iyo cryptocurrency fivha inoramba ichigadzira inoshamisa nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Russia inosunga mainjiniya akati wandei ekushandisa supercomputer kumigodhi bitcoin
Olympus Pen E-PL9: Dhizaini yeti retro ine 4K yekurekodha
Isu takaedza iyo Aukey LT-SL1 inofamba sensor yekunze LED mwenje